Madaxwayne: Hassan Sheikh Mohamoud Kala Saar ‘Geedi Socodka Nabada Iyo Saaxiibadaa Damul-Jadiid’ | Somaliland Today
← Ambassador Kayser Waa biriijka Mucaaridka iyo Muxaafidka Somaliland
Beelweynta Muuse Ismaacil GADHWEYN Oo Taageeray Waxqabadka Madaxweyne Silaanyo →
Madaxwayne: Hassan Sheikh Mohamoud Kala Saar ‘Geedi Socodka Nabada Iyo Saaxiibadaa Damul-Jadiid’
DalJoog iyo QurboJoogba waxay isla markii la doortey Madaxwayne Hassan Sheikh Mohamoud walaac ka muujiyeen xulufadiisa ‘Damul-Jadiidka’, oo ula muuqday in ay yihiin isbahaysi ku salaysan xulafaysi qabiileed, isla markaana leh ujeedadooyin ku salaysan kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, dhamaan ummadda Soomaaliyeed, ayaa walaac ka muujiyey fikirka xajirka ah, ee uu Farah Sheikh Abdulkaadir uu hormoodka ka yahay.
Sida ku cad qoraalkaygii aan cinwaanka uga dhigay “Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya: Abdulwali Sh. Ahmed Oo U Muuqda Inuu Helay ‘Dawadii Damul-Jadiid‘”, ayaad waxaad moodaa in Ra’isal Wasaare Abdiweli Sheikh Ahmed uu ka faa’iidaystey siyaasadii foosha xumayd ee lagu riday Dowladii uu madaxa ka ahaa Ra’isal wasaare Sa’id. Siyaasiin Soomaaliyeed ayaa aaminsan in uu Ra’sal Wasaare Sa’id uu shaqadiisii ka wadi waayey faragelinta ay ku hayeen madaxda Damul-Jadiidka, ee ugu horeeyey Farah Sheikh Abdulkaadir.
Waxaa soo if baxaysa in Ra’isal Wasaare Abdiweli Sheikh Ahmed uu ka biyo diidey feriglinta xulafada Damul-Jadiid ay ku hayso xukuumadiisa, uga danbayntiina sabatey in mudane Farah Sheikh Abdulkadir laga qaado xilkii Wasaarada Garsoorka Cadaaladda iyo Dastuurka, loona dhiibo xilka Wasaarada Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa maadaama uu geed dheer iyo mid gaaban u fuulay in geedi socondka nabada dalka lala rabey aan la gaarin.
Si kastaba ha ahaatee, Damul-Jadiid ayaa nadhaamka 4.5ka, ee faquuqa qowmiyad ka mida qowmiyadaha Soomaaliyeed ku saleesan, ku keenay Ra’isal Wasaare Abdiweli Sheikh Ahmed, isku dhaca ka dhex dhacay asaga iyo Madaxwaynahuna ay tahay mid la xariirta xulufada Damul-Jadiidka ku hayaan madaxda dalka. Waxaase laga rabaa in Madaxwayne Hassan Sheikh Mohamoud uu kala doorto saaxiibadiis iyo waajibka dalka ka saaran.
Faragelinta Damul-Jadiid ku hayaan madaxda Soomaaliyeed, ma laga yaabaa in ay ku xigto handaad ama isku dhac keena gacan ka hadal. Aqristow, bal adiguba ka fikir arintaan oo u muuqata mid dib u soo celin karta shaqaaqooyinkii dhacay dabyaaqadii sanadkii 1990kii, ahna taariikh madow ee ku habsatey dalkeena, oo ayna cidna dan ugu jirin in ay arintaasoo kale ay markale soo noqoto. Taasina ay tahay mida dadka inta badan ay u doorteen in ay arkaan dhamaan Federaali ku saleesan oo Soomaaliya lagu xukumo.
Waxaa soo koobay: Mohamed Barre – Junlay “Buluf”, qoraa madaxbanaan, oo wax ka qora arimaha Soomaalida, degana magaalada Minneapolis, MN – Junlay99@aol.com